Imveliso yokhuseleko lomlilo mveliso-China Imveliso yokukhusela umlilo abavelisi, abaxhasi
Ulwakhiwo elula: ukutshiza, mqengqeleki ukutyabeka kunye ukuxubha inokusetyenziswa. Ukunamathela okuqinileyo: ine-adhesion eyomeleleyo kuhlobo lwe-epoxy, uhlobo lwe-alkyd kunye nohlobo lwe-phenolic antirust primer, eqinile kwaye yomelele, isetyenziswa ngokubanzi, ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi. I-Cdgc-yangaphakathi yentsimbi enobunkunkqele yesakhiwo sesinyithi sokulungisa umlilo ilungele ukukhuselwa komlilo kwamalungu athwala umthwalo weeprojekthi ezahlukeneyo zentsimbi kunye nomda wokumelana nomlilo ongaphezulu kwe-2 h. Ezifana ne-aerospace, i-petroleum, imboni yamachiza, amandla ombane, isinyithi, ukhuselo lukazwelonke, ishishini lokukhanya kunye nelaphu kunye nezinye izakhiwo zangaphandle zithwala ukhuseleko lomlilo lwensimbi enzima, kwaye zilungele ngokukodwa iiprojekthi ezithile zentsimbi ezinobungozi bomlilo weekhemikhali zehydrocarbon. (ezinje ngeoyile, isinyibilikisi, njl.njl.), ezinje ngobunjineli be-petrochemical, igaraji, iqonga lokomba i-oyile, isakhelo sokuxhasa ioyile, njl.